I-Texas yasePhandle kunye nePark Water Waters - Fumana i-Cool Fun
Eunited States ETexas
Fumana Okumnandi KwiiPasifi zamanzi zaseTexas
IziPhandle zangaphandle kunye neeParti zangaphandle Zenza i-Splash-Round round
Iba namandla ashushu kwaye anomswakama eTexas. Akumangalisi ke ngokokuba kukho iipaki ezininzi zamanzi.
Phakathi kweyona ndawo ephawulekayo ukufumana ukuzonwabisa okumanzi kwaye ufuna ukukhulula kwi-Lone Star State nguSchlitterbahn. Indawo enegama elimnandi (lithetha "umthambeka osisigxina" kwisiJamani) yenye yeepaki ezithandwa kakhulu, ezinkulu, kunye neendlela ezintsha - kungekhona nje eTexas, kodwa kwihlabathi jikelele. Indawo yokuqala yaseBraunfels iyaphumelela, abanikazi bayo bakhile ezinye iipaki zeSchlitterbahn kwezinye iindawo zombuso.
Enye ipaki yamanzi ethathwa kakuhle yi-Aquatica e-SeaWorld San Antonio. Iqukethe umxholo oshushu othe ngqo kunye nemiboniso yezilwanyana.
Njengoko kwezinye iindawo zelizwe, iipaki zamanzi zangaphakathi ziye zabanjwa eTexas. Kukho inani leendawo zokungcebeleka ezinikezela nge-slide kunye nokudibanisa ukutshintsha. Ezi iipaki zamanzi zilandelayo zilungiswe nge-alfabhethi.
I-Aquatica elwandle eliseSan Antonio
Ipaki enkulu yamanzi yangaphandle idinga ukungena ngokwahlukileyo kwi-SeaWorld San Antonio. Iipaki eziphambili ziquka izilwanyana eziphilayo, iipilisi zesilayidi, iislayidi zomzimba, ukukhwela kwintsapho, ukuhlambalaza, umlambo onobuqili, indawo yokudlala yamanzi kunye neendawo zokudlala ezincinaneni.
Ipaki yamanzi ephakathi kunye neqoqo efanelekileyo yamatyeyidi, kuquka ne-Bermuda Triangle tower kunye neeslayidi zomzimba ezintathu, i-Riptide Slide kunye no-Bahama Bullet, i-slides onokukhwela kwi-tubes eyodwa okanye ezimbini, kunye neTurgaga Express, i-multi-lane ukugibela umgibe.
Ipaki encinane, kamasipala, ipaki yamanzi yangaphandle kunye nesitya sesilayidi, itlanzi elipheleleyo, isakhiwo sokudlala kwamanzi, isanti sokungena, kunye nezinye izinto ezikhangayo.
Ipaki yamanzi yangaphandle ephakamileyo ilungiselela umxube omnandi wezinto ezikhangayo kuquka iKlaffhanger, islayidi yesigidi sesigxina, iStorm Watch Tower ene-tube evulekileyo kunye neengqungquthela ezifakiwe, i-Buccaneer Bay edlala kwindawo yokudlala yamanzi, umlambo onobuqili, i-pool yamanzi, i-volleyball yamanzi kunye imisebenzi yabantwana abaselula.
Indawo yokupaka yamanzi ngaphakathi. Vula kwiindwendwe zeehotele ezibhaliswe kuphela. Ukupasa kweSuku akufumaneki. Ngeenyawo eziyi-80,000 zeenyawo, ipaki yamanzi inkulu kwaye inika iindawo ezininzi ezikhangayo eziquka isitya se-slide, uhambo lwe-funnel, i-pool yolwazi, ipulazi yomsebenzi, umlambo onobuqili, ii-spy spray spas kunye nesakhiwo sokudlala esisebenzisanayo kunye nebhakethi elikhuphayo.
EHawaiian Falls Waterparks
Ikhonkco leepaki zamanzi zangaphandle zinendawo e-Colony, eGarland, eMansfield, ePflugerville, eRoanoke naseWaco.
Iindawo ezithandwayo ziyahlukahluka kwindawo ephakamileyo kwiipaki, kodwa zonke iipropati zaseHawaii zinikela ngezinto ezininzi ezinqabileyo kunye nezinto ezithandekayo kunye nemisebenzi yabantwana abancinci.
Ipaki ephakathi ngaphandle inikeza umlambo onobuqili, ipulazi lokutshulwa, i-speed-racing racing slide, isikhulu sokudlala amanzi, i-slides ye-tube, i-slides yomzimba kunye ne-spray deck.
I-Lubbock Water Rampage
Ipaki yamanzi yangaphandle. Iindawo zokutyelela ziquka umlambo weRio Rampage uvila, i-Tidal Wave pool pool, i-Twin Twisters, kunye neDolin Cove yabantwana.
Ipaki yamanzi enkulu yangaphandle inika iindawo ezininzi zokukhwela kunye nezikhenketho eziquka izilayidi zomzimba, i-capsule slide, i-coaster yamanzi, i-racing slide, umlambo onobuqili, i-pool enkulu, kunye neziko lokudlala amanzi.
Amapaki amaninzi angaphandle nangaphandle angaphandle kwiindawo zaseMzantsi Padre Island, iCorpus Christi, iGalveston Island, kunye neyokuqala, i-flagship yeSchlitterbahn e-New Braunfels
Intsha yeBraunfels Schlitterbahn yenye yeepaki ezinkulu zamanzi kwilizwe nakulo lonke ihlabathi. Ngeendawo zokuhlala kuzo, ipaki enkulu yindawo ekuya kuyo indawo yokutyelela ukuhamba ngosuku. Intsapho eqhuba iipaki iye yaphuhlisa ubuninzi bepaki yamanzi, kuquka ukukhupha kwamanzi kunye nomtsalane we-FlowRider.
Iimpawu eziMathandathu zeHurkane
Ipaki yamanzi engaphandle ngaphandle kweePlagizi ezintandathu ngaphesheya kweTexas, kodwa idinga ukuvunyelwa ngokwahlukeneyo epakini lokuzonwabisa. Iindawo zokutyelela ziquka ukukhwela kwendlovu, ukukhwabanisa ukukhwaza ngamagagasi anqamlekileyo, indawo yokudlala yamanzi ye-kids, indawo yokudlala yamanzi, i-slides ye-tube, iplazi yomsebenzi, i-slides yomzimba, i-slides ngesivinini, umkhonto we-raft, umlambo onobuqili, isitya sokuhamba, ukukhwela kwemibhobho yomibini, kunye ne-racing slide.
Umtya weepaki zamanzi zangaphandle kunye neendawo zaseCanton, iGreenville, i-Hudson Oaks kunye neNacogdoches
Iipaki ezisezingeni eliphakathi zibonelela ngeendidi ezahlukeneyo ezikhangayo ngendawo.
Ipaki ephakathi nendawo inika umlambo onobuqili, i-pool yolwandle, kunye neqoqo elungileyo lomzimba kunye neeshubhu ze-tube. Kwakhona kubonisa amakhonsathi ngamanye amaxesha, imincintiswano, kunye nemicimbi ekhethekileyo, njengobusuku bokuhlaziya kwiifilimu apho iifilimi zeentsapho ziboniswa kwisikrini phambi kwesazi lokutshala.
Ipaki yamanzi engaphandle ngaphandle kwamanzi amaninzi kunye nama-slides, i-slides ye-tube, i-pool ye-Tidal Wave Bay, iLazzy-T, kunye neDueling Dalton Aqua Loop.
Waterpark kwiiNdawo zeeNdawo
Ipaki yamanzi encinci yasemanzini ivulekile kumalungu eSilleluaf. Iindawo zokutyelela ziquka ichibi elincinci lomlambo, umlambo onobuqili, ama-slides amancinci amane, kunye nesiteshi sokudlala samanzi kunye nebhakethi yokulahla.
I-Wet 'n' Wild Town Splash
Ipaki yamanzi ephakamileyo yangaphandle kunye nenani elikhulu lezinto ezikhangayo ezibandakanya ukukhanga kwe-FlowRider, ukukhwela kwintsapho yaseBig Kahuna, i-Brain Drain isilayidi esineenkomfa kunye neendawo zokuhlaziya, i-Big Spin ibhokhwe, ukukhwela kwinqwelo, kunye ne-Texas Freefall isivinini.
Ipaki yamanzi yangaphandle. Iindawo zokutyelela ziquka i-slides yomzimba, i-slides ye-tube, islayidi yesantya, i-pool Island wave wave, umlambo onobuqili, kunye nemisebenzi yabantwana abancinci.
I-White Water Bay kwi-Six Flags Fiesta Texas
Ipaki ephakamileyo yamanzi ibandakanywe ne- Six Flags Fiesta Texas . Iindawo zokutyelela ziquka izakhiwo ezimbini zokudlala amanzi, i-Tornado funnel slide, umlambo onobuqili, i-pool enkulu yomswakama, kunye ne-tube multiple and body slides.
Iiglasi zeGalufa eziphezulu eTexas 'iRio Grande Valley
Iindawo ezinika umdla zotyelelo e Texas Hill Country
Uya Kuphi Ukuthengwa Kuyo yonke iNtetho yaseTexas
Ukuchitha iiholide kwiLwandle lwaseTexas
I-New Giant yaseTexas kwiMathandathu Iiflegi ngaphaya kokuhlaziywa kwe-Roller Coaster Review
I-Rattlesnake Roundup-Sweetwater, eTexas
Indlela Yokuvakalisa Amagama aseNdiya: Iintlanga zase-Arizona
I-Montreal Clock Tower Beach 2017 Imihla kunye neeRhafu
Uluhlu olupheleleyo lwee-stations zase-Oklahoma City FM
Isikhokelo sohambo ku-Kuala Lumpur, eMalaysia
Iindawo zokutyela zaseDowntown eCleveland
I-Baobab: Iinkcukacha ezonwabileyo malunga nomthi wobomi boMzantsi Afrika
Iindawo zeLifa leMveli ze-UNESCO eScandinavia
Iindawo ezininzi zoLuntu eBerlin
7 I-New York City Ihotele zeeHholide zeeMindeni Ukuthanda
I-Burgers ehamba phambili Unako ukuya ePittsburgh
I-Hermitage Museum eSt. Petersburg, eRashiya
15 I-Great Washington DC Ibhedi kunye neNqabileyo
Uhla lwemihla: Ukujoliswa kweTgetget, Food and Fun
Ubuzwe obufanelekayo kwiVisa yaseShenzhen